> Resource> Naghachi> Olee naghachi Photos si Canon PowerShot ELPH 300 HS
Enwere m ike weghachite Photos si Canon PowerShot ELPH 300 HS?
Nsogbu m bụ banyere furu efu photos na m Canon PowerShot ELPH 300 HS igwefoto dijitalụ. Nwanne m nwaanyị biiri dijitalụ m igwefoto enye formatted ya kaadị ebe nchekwa. Nke a bịara na Agbahapụ m niile foto na ya, nke m na-agafere kọmputa m ma. Dị ụzọ ọ bụla na m nwere ike gbapụta foto site na Canon PowerShot ELPH 300 HS? M n'ezie chọrọ enyemaka gị!
Ọ dị m nwute nke ukwuu ịnụ nke ahụ. Otú ọ dị, e nwere ozi ọma maka gị. The formatted foto ndị ka na gị Canon PowerShot ELPH 300 HS igwefoto. Ha na-akara dị ka keerughi data na gị na igwefoto dijitalụ si na kaadị ebe nchekwa ruo mgbe ọhụrụ data na-edochi ohere ha na-arụ. Ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake foto site na Canon PowerShot ELPH 300HS, ị kwesịrị ịkwụsị iji igwefoto gị ma ọ bụ na-etinye ọhụrụ ọ bụla faịlụ ka ya na kaadị ebe nchekwa.
E nwere ọtụtụ omume na ị pụrụ iji weghachite foto site na Canon PowerShot ELPH 300 HS. Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac bụ nnọọ ihe kasị mma nhọrọ maka gị. Nke a na usoro-enyere gị aka inwetaghachi furu efu, ehichapụ na formatted foto gị Canon PowerShot ELPH 300 HS na ala. Ugbu a ọ na-akwado ndị na mgbake nke fọrọ nke nta niile foto formats, dị ka GIF, TIF, BMP, jpg, PNG, PSD, WMF, CR2 na ndị ọzọ.
Ị nwere ike nweta a ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery si n'okpuru. N'ọnwụnwa a version Bales ị Ka ịhụchalụ hụrụ photos tupu agbake ha. Biko download nri version maka kọmputa gị os.
Igosi Canon PowerShot ELPH 300 HS Photo Recovery na nzọụkwụ abụọ
Ka na-agbalị iji weghachite furu efu foto site na Canon PowerShot ELPH 300 HS igwefoto dijitalụ na Windows version nke Wondershare Photo Recovery.
Mgbe launching ngwá ọrụ, ị ga-ahụ ihe omume window nile na-akwado ngwaọrụ. Ị dị nnọọ mkpa pịa "Malite" na-amalite mgbake.
Nzọụkwụ 1 Họrọ kaadị ebe nchekwa gị Canon PowerShot ELPH 300 HS ka iṅomi maka furu efu photos.
Usoro ihe omume ga-egosipụta niile partitions na kọmputa gị, gụnyere tour Canon PowerShot ELPH 300 HS si kaadị ebe nchekwa.
Ị dị nnọọ mkpa pịa "iṅomi" ịchọ gị okụrede photos. Biko pịa "iyo Nhọrọ" iji họrọ kpọmkwem photos formats na ị na-aga na-agbake ka ebelata scanning oge.
Cheta na: Gbaa mbọ hụ na gị Canon PowerShot ELPH 300 HS ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa nke ọ na-ike ghọtara site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 Naghachi Photos si Canon PowerShot ELPH 300 HS Digital Igwefoto
Mgbe iṅomi dị n'elu, na Doppler N'ihi ga-depụta niile hụrụ photos ke window. Biko ịhụchalụ ha ka ha n'aka otú ọtụtụ n'ime gị furu efu photos nwere ike gbakee. Na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike nye akara photos mkpa ka ị pịa "Naghachi" iji họrọ a nchekwa na kọmputa gị na-azọpụta ha.
Top 10 Video Downloaders maka Mac OS X El Capitan
MKV Iweghachite: Naghachi ehichapụ ma ọ bụ Echefuola MKV Videos na ala
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site Blackberry Bold
PS2 Kaadị ebe nchekwa Iweghachite: Naghachi ehichapụ ma ọ bụ Lost faịlụ site PS2 Kaadị ebe nchekwa